के अमागी ब्रिलियन्ट पार्क वर्थ हेरिरहेका छन्? - पालना दृश्य
by Dima XNUM Xth 25 12th जनवरी 2022
1 टिप्पणी अमागी ब्रिलियन्ट पार्क वर्थ हेर्दै हुनुहुन्छ?
अवलोकन - अमागी ब्रिलियन्ट पार्क वर्थ हेर्दै छ?
अमागी ब्रिलियन्ट पार्कको मेरो विचारमा एक आकर्षक र रमाईलो कथा थियो, र यो मुख्यतया हाम्रो मुख्य पात्र Seiya कानी द्वारा एक मरिरहेको मनोरञ्जन पार्क को बहाली र मुक्ति वरिपरि घुमाउँछ। म एबीपीको रूपमा अमागी शानदार पार्कलाई जनाउँदै छु, त्यसैले सचेत रहनुहोस्। मैले किरदारहरू यादगार पाएँ, तर प्राय जसो म साँच्चिकै घृणा गर्थे। यो किनभने उनीहरु अत्यन्त कष्टप्रद र क्रिन्ज थिए, एनिमेस मानकको लागि पनि। यद्यपि धेरै व्यक्तिहरू एबीपीमा फरक फरक देखिन्छन्, र मैले याद गरे कि यो धेरै व्यक्तिहरूले मन पराए, यद्यपि मैले यसलाई धेरै ठाउँमा सिफारिस गर्न सकेनु र यो पनि पाउन मलाई धेरै गाह्रो भयो।
चरित्र विकास र चरित्र सम्बन्धको मामलामा, तिनीहरू कुनै प्रकारका छैनन्। हामी देख्दैनौं कि क्यारेक्टरहरू बीच कुनै धेरै, धेरै विकास, यति तपाईको आशालाई प्राप्त नगर्नुहोस् यदि तपाईं पात्रहरू बीच केही यौन तनाव प्रकारका सामानहरू खोज्दै हुनुहुन्छ, किनकि यो धेरै उपस्थित छैन। त्यसो भए एबीपी हेर्न लायक छ? के म यस ब्लग मा भित्र पस्ने छ, त्यसैले पढ्न जारी राख्नुहोस्। साथै यो लेख दुबै अमागी ब्रिलियन्ट पार्क समीक्षा र अमागी ब्रिलियन्ट पार्क हो कि छैन हेर्ने कारणहरूको सूची हो।
ओह, र सुन्नुहोस् तिनीहरूको थीम ट्यूनमा यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, मैले यो पाएँ धेरै यादगारः
अमागी शानदार पार्क - खोल्दै | अतिरिक्त जादू घण्टा
सामान्य कथा - अमागी ब्रिलियन्ट पार्क वर्थ हेर्दै छ?
"Amagi शानदार पार्क" एपिसोड from बाट लिइएको
एबीपीको सामान्य कथन एकदम सरल छ, र मैले वास्तवमै कथा सेट अप गर्ने तरीका मनपराएँ। यो बुझ्न मलाई गाह्रो भएन र यसले एक सरल समस्या समाधान प्रकारको कहानी सेट गरेको छ, जुन बाटोमा केहि राम्रा र रमाईलो र मनोरन्जनात्मक उप कथाहरूको साथ छ। कथा सेईया कानीसँगै सुरू हुन्छ, हाईस्कूलको विद्यार्थी, जहाँ इजुजु सेन्टो पनि एक विद्यार्थी हुन्। कथा मुख्य रूपमा वेथरका प्रभावहरू हुन् वा अमागी ब्रिलियन्ट पार्क इ Watch्ग वाचिth योग्य छैन किनकि तपाईं पात्रहरू वा संवादका लागि वरिपरि पर्खेर बस्नुहुनेछैन भन्ने कुरा निश्चित छ।
सेन्टोले एबीपीलाई बचाउने उनको उद्देश्यमा सहयोग नगरेमा केनीलाई शारीरिक हिंसाको धम्की दिन्छ किनभने यसका आगन्तुकहरूको संख्या 500,000 वर्षदेखि4भन्दा कम छ र यदि महिनाको अन्त्यसम्ममा 500,000 भन्दा कम आगन्तुकहरू छन् भने पार्कलाई बेचिनेछ। निजी कम्पनी र निकुञ्ज अन्तर्गत कार्यरत सबैलाई अनावश्यक बनाइनेछ । दोस्रो एपिसोडमा हामी देख्छौं कि सेन्टोले केनीलाई पार्कको प्रबन्धक बनाउन चाहन्छ र उनी सहमत छन्।
क्यानीले उनी एपिसोडहरू र दोस्रो भागमा कत्ति सक्षम छन् भनेर देखाउँदछन् जब उनले पार्क पार्ने राज्य र त्यहाँ कार्यरत सबैलाई सम्बन्धी प्रेरक भाषण दिन्छन्। पार्कले अधिक दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्न महिनाभरि धेरै स्टन्टहरू पार गर्नुपर्नेछ। यसमा भिडियो ट्यापिंग समावेश "बहिनीहरू"धेरै प्रकट पौडी सूट लगाएको र नाच्ने बखत मूर्ख नारेहरू, पछि अधिक दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्न विज्ञापन सेवा मार्फत भिडियो अनलाइन पोष्ट गर्दै। उनीहरूले "Everything for० को लागी सबै चीज" जस्ता डिलहरू सिर्जना गरे। स्टन्टहरू सामान्यतया काम गर्दछन् र उनीहरूले दैनिक प्राप्त गर्ने आगन्तुकहरू उल्लेखनीय रूपमा उदाउँदछन्, यो स्पष्ट रूपमा धेरै नजिक छ र यसले यसलाई तीव्र बनाउँछ।
मुख्य चरित्रहरूमा, प्राय: सेन्टो र कानीले मर्ने राजकुमारी लतीफाको समस्यासँग सामना गर्नुपर्दछ, जो "म्यापल ल्यान्ड" भनेर चिनिने जादुई राज्यको राजकुमारी हो। म्यापल ल्याण्डका पात्रहरू अति अनौंठो र कष्टकर छन्। तिनीहरू सामान्य जापानी मस्कट्सको रूप लिन्छन् मोफ्ल। मैले यो भन्न आवश्यक छ कि तिनीहरूका आवाजहरू धेरै कष्टकर छन् र म आफैँ सोच्ने गर्थें कि म यो श्रृ series्खला किन मास्काट्सको दृश्यहरू देखाउँदै थिएँ, त्यसैले सचेत रहनुहोस्। यो खुलासा गरियो कि यदि पार्क सफल भएन भने राजकुमारी लतीफा मर्नेछ। यो पनि प्रकट गरियो कि उनी १ 14 वर्ष नाघेर नसक्ने, र यो उमेरमा निरन्तर रहिरहन्छिन्, कहिल्यै हुर्किनन्। मलाई किन आइडिया छैन, तर मैले यसलाई फेरी रिभ्याच गर्न चिन्ता गरेन, म त्यति चासो राख्दिन।
मलाई थाहा छैन यदि यो म मात्र हो तर मैले सोचे कि सेन्टो रोमान्टिक रूपमा कानीमा लगानी गरिएको थियो तर म उनलाई वास्तवमै उठाउन सक्दिन यदि उनले वास्तवमा उनलाई मन पराउँछिन्, वा यदि उनी पार्कको लागि सबैभन्दा उत्तम के हो भने। उनीले उनलाई सोच्न मद्दत गर्ने कोशिस गरिरहेकी थिइन, तर जे भए पनि, त्यो कतै गएन, जस्तो कि शृंखलामा धेरैजसो चरित्र आर्कहरू।
मुख्य पात्रहरू - के अमागी ब्रिलियन्ट पार्क वर्थ हेरिरहेका छन्?
Seiya कानी सेन्टो पनि उपस्थित हुने लोकप्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालयको विद्यार्थी हो। ऊ was बर्षको उमेरमा बच्चाको तारेमा काम गरेको कारण उसले नार्सिस्टिस्टिक व्यक्तित्व प्रदर्शन गर्दछ। ऊ प्रायः अरूसँग बोल्छ र उनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने काममा राख्छ। यसले उसलाई सामान्यतया असहनीय बनाउँछ र वास्तवमा मलाई कसैलाई सहानुभूति प्रदान गर्न दिदैन। उहाँ परम्परागत रूपमा आकर्षक र क्रमबद्ध प्रकारको छ।
ऊ धेरै विश्वस्त छ र यो उसको उपस्थितिमा छ, यद्यपि उसको व्यक्तित्व निकै कष्टकर र अप्रिय छ, उसले धेरै राम्रो नेतृत्व र समस्या समाधान गर्ने सीप समावेश गर्दछ जसले उसलाई अलि बढी प्रशंसनीय बनाउँछ। उसले पैसा र तथ्या .्क राम्रोसँग चलाउन सक्छ र यसले उसलाई म्यानेजर हुन सक्षम बनाउँछ।
यद्यपि यो देखिन्छ कि सेन्टो र क्यानी एक राम्रो मेल हुनेछ, केहि कारणले ऊ सेन्टोलाई त्यसरी कहिल्यै देख्दिन, र मलाई लाग्छ कि यो धेरै नै सेन्टोलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ किनकि उनी प्राय जसो उनी अपमानित हुन्छन् किनकि उनी धेरै देखाईएको छ। उनी पहिले भन्दा उत्तम व्यवस्थापक थिए।
इसुजु सेन्टो क्यानीले हाईस्कूलमा पढ्ने विद्यार्थी पनि हो र मेरो विचारमा उनी धेरै बोरि। छिन्। केहि कारणहरूले लेखकहरूले सोचे कि यो सेन्टो प्रायः सबै समय मोनोटोन आवाजमा बोल्नु चतुर विचार हो। यसको मतलब सेन्टोको मुखबाट निस्केको सबै द्रष्टव्यहरू उस्तै ध्वनि हुन्छन्, उनको आवाजमा कुनै परिवर्तनको आवृत्ति छैन। यो उनको चरित्र धेरै दर्दनाक र हेर्न डरलाग्दो बनाउँछ।
यद्यपि उनी आकर्षक छन् र वर्णन गरिएको छ कवाई उनीले कुनै पनि व्यक्तित्ववादको कुनै भावना महसुस गर्दैनन्। मैले भने जस्तै, म वास्तवमा कसलाई सहानुभूति देखाउने को लागी प्राप्त छैन, किनभने यो निश्चित रूप से सेन्टो छैन। उनको महत्वाकांक्षा र डर एबीपीका अन्य सबै कर्मचारीहरूसँग समान छन्, वास्तवमा, उनी सम्भवतः सबै भन्दा राम्रो स्थानमा छिन्, उनको हेराईले, उनले सजिलैसँग अर्को जागिर पाउन सक्नेछिन् जुन आर्थिक रूपमा राम्रो हुन्छ, उदाहरणका लागि अभिनेता जस्तो। ।
उनीसँग पनि (कुनै प्रकारले) "मस्केट राइफल" छ, जुन १ kind औं शताब्दीको बन्दुक हो? उनी अक्सर क्यानी र यससँगका अन्य पात्रहरूलाई धम्की दिन्छिन् र नियमित रूपमा डिस्चार्ज गरिन्। त्यो महत्त्वपूर्ण होइन तर केवल १२ र एपिसोडहरूमा मात्र उनको चरित्रको बारेमा मैले सम्झिन सक्ने एक मात्र रोचक चीजको बारेमा कुरा गर्दछु जुन राम्रो कुरा होईन।
अन्तिम हामीसँग छ राजकुमारी लतीफा फ्लेरन्जा जो मलाई प्रकारको मन पर्यो तर अत्यन्तै कष्टप्रद पनि भयो। यद्यपि उनले एक गम्भीर बिरामी भएको लुकाइन जुन जीवनलाई जोखिममा पार्ने थियो। उनीले पार्कमा आफ्ना लक्ष्यहरू कानीमा वास्तवमै कहिल्यै धकेली सकेनन्, र मेरो दृष्टिकोणबाट वास्तवमै त्यस स्थितिमा राख्नु हुँदैन जुन उनी जैविक उमेर र सम्भावित निर्दोषतालाई देखाउँछन्।
उनी सामान्यतया नरम मीठो आवाजमा बोल्छिन् जुन उनी सामान्यतया धेरै प्रयोग गर्दैन। उनीसँग वास्तवमा केहि छैन जुन उनको चरित्रलाई रमाईलो बनाउँदछ कि उसको टर्मिनल बिरामी थियो र वर्तमान राजकुमारी थियो।
मलाई लाग्छ कि उनी कानीको प्रेममा थिइन्? यदि उनी थिइन भने, ती दुबै बिचमा के भएको थियो भनेर समाप्त गर्न तिनीहरू चिन्तित भएनन्। उनीहरूले सेन्टोसँग केही अस्वीकृति चाप बनाउन सक्थे जुन मैले सोचे कि यो एक राम्रो सम्भावित विचार हो, तर स्पष्टतः त्यस्तो त्यस्तो केही पनि भएको थिएन त्यसैले आफ्ना आशाहरू नराख्नुहोस्।
उप पात्रहरू - अमागी ब्रिलियन्ट पार्क वर्थ हेर्दै छ?
कारण Amagi शानदार पार्क लायक हेरिरहेको छ
पात्रहरू आफैंमा अद्वितीय प्रकारका हुन्छन् र कुनै किसिमको हास्यास्पद हुन सक्दछन्, यदि तपाईं त्यस्तो सबै माध्यम हुनुहुन्छ। यद्यपि यो एक किसिमको लागी मैले बाल शो देखिरहेको थिएँ। हुनसक्छ यो केवल म हो तर म निश्चित छुईन, रेखाचित्र डिजाइन जुन म श्रृंखलाबाट धेरै मन पराउँछु त्यसैले म त्यसलाई त्यहाँ क्रेडिट दिनेछु।
त्यहाँ केही राम्रा दृश्यहरू थिए जहाँ म हेर्दै थिएँ जुन राम्रो देखिन्छ। योसँग राम्रो गतिशील कथा छ जुन सँगै जान सजिलो छ र तपाईं को लागि रुट्दै हुनुहुन्छ भनेर जान्न सजिलो छ। तर मलाई थाहा छ कि त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जो यस चीजको बच्चा खोजिरहेका छैनन्। यसले कहिलेकाँही यो पट्टिलो हुनबाट रोक्छ, किनकि यदि तपाईं पार्कले कसरी यो विशेष अवस्थाबाट बाहिर निस्कने बारे सोच्दै हुनुहुन्छ, र सेन्टो र क्यानीले तिनीहरूलाई कसरी बचाउँदछन् भन्ने बारे सोच्दै हुनुहुन्छ।
यदि तपाईं एक साधारण, खुशी र खुशी खुशी र अन्त प्रकारको कथा खोज्दै हुनुहुन्छ भने एबीपी तपाईंको लागि हो। मैले बहिनीहरूका सुविधाहरू राम्रा आकर्षक फेला पारे, तिनीहरू मध्ये धेरै जसो सबै बिम्बोज थिए र ती मध्ये कुनै पनि वास्तविक कौशल थिएन। तर अवश्य पनि हामीसँग दर्शकहरू छन् जसले सबै बस्ट एक्शनलाई मन पराउँछन्। अमागी ब्रिलिन्ट पार्कसँग निश्चित रूपले चिन्ता नलिनुहोस्।
"अमागी शानदार पार्क" एपिसोड।
कारण Amagi Brillaint पार्क लायक हेरिरहेको छैन
इमान्दारीताका साथ, ABP हेर्ने कारणहरूको बारेमा सोच्न निकै गाह्रो छ। तर मलाई लाग्छ यो निर्भर गर्दछ कि तपाई कस्तो प्रकारको मानिस हुनुहुन्छ। किनभने मेरो लागि एबीपी मैले चाहेको कुरा थिएन। यो कुनै अन्य कहानी आर्कहरू बिना फरक दिशामा जान वा मैले उनीहरूलाई कस्तो लाग्यो सोचे भन्दा फरक तरिकाले अन्त्य नगरी समाप्त गर्न स्पष्ट सुरुवात थियो। हामीले समस्याको स्पष्ट समाधान देख्यौं र एबीपी हेर्दा यो मेरो लागि सब भन्दा ठूलो समस्या थियो। तर पहिले मेरो मुख्य समस्यालाई बाहिर निकालौं।
धेरै जसो उप क्यारेक्टरहरू, विशेष गरी मास्कट एकदम कष्टकर थिए र म ती सबैलाई घृणा गर्दछु। वास्तवमा मैले स्पेशल (जुन डब थियो) हेर्न पनि चिन्ता लिएन किनकि म यति खुशी थिए कि यो समाप्त भएको थियो र मैले उनीहरूको आवाज फेरि सुन्न आवश्यक छैन। यसको लागि, म कृतज्ञ छु। तर हो, मस्कट्सको आवाज पीडा हो, सेन्टोको कुरा गर्नुहुन्न, जसले मलाई चिढाउने भन्दा बढि क्राइप गर्दछ। यस्तो देखिन्छ कि यो कथा यत्तिको सजिलोसँग लेख्न सकिन्छ।
मलाई थाहा छ एनीम जे भए पनि यथार्थपरक छैन तर एबीपी जे भए पनि, आकार वा फारममा यथार्थपरक छैन। अधिकांश एपिसोडहरू अलिकता पनि परम्परागत तर्कको सबै पक्षहरू बेवास्ता गर्दछन्। दर्शकहरूको लागि जो क्यारेक्टरहरू र रहस्य कथानक बिच्छेदहरूको बीचमा द्वन्द्व खोज्दै छन् तब तपाईं वरिपरि छडी चाहनुहुन्न। अमागी ब्रिलियन्ट पार्कले वास्तवमै प्रस्ताव गर्दैन, यसले स्पष्ट समस्या र समाधानको साथ एक सरल कथा प्रस्ताव गर्दछ।
कथाको ठुलो हिसाब राख्न ठ्याक्कै अन्त्य वा चाल थिएन। यो हेर्नको लागि मजाको कुरा हो र मैले केवल त्यसबेला रुचि पाएँ जब दिदीबहिनीहरूले अधिक ग्राहकहरू लिन केही बेवकूफ नृत्य गरिरहेका थिए। सम्पूर्ण श्रृ really्खला वास्तवमै बिर्सने योग्य थियो र मैले पहिले भनेजस्तो स्पेशल हेर्न पनि कहिले चिन्ता लिएन।
अमागी ब्रिलियन्ट पार्कले खास गरी आरामदायी र हास्यास्पद आभा उत्पादन गर्दछ, तर कथा मैले देखेको अन्य एनीमेज जत्तिकै हास्यास्पद वा रोचक छैन। यदि तपाईं अधिक जटिल र "उच्च दांव" प्रकारको प्लट खोज्दै हुनुहुन्छ भने एबीपीको साथ चिन्ता नगर्नुहोस्, तर यदि तपाईं हाँस्न र केही आराम गर्न केहि खोज्दै हुनुहुन्छ भने, म यसलाई शट दिनेछु।
यद्यपि मैले एबीपीलाई मन पराएको एक कुरा भनेको यसको पलायनवाद हो। केनी स्पष्ट रूपमा त्यो पुरानो होईन र सेन्टो र अन्य उप पात्रहरूको सहायताले सम्पूर्ण कुरालाई बाहिर तान्नको लागि पर्याप्त प्रभावशाली छ भन्ने तथ्य। मलाई लाग्छ ऊ लगभग १ 17 - १ years बर्षको हुनुपर्छ। यसले उसलाई प्रशंसनीय पात्र बनाउँदछ र यसले हामीलाई आशा र आश्चर्य दिन्छ जब हामी एक पात्रको रूपमा उहाँमा लगानी गर्छौं।
हामी पहिलेका एपिसोडहरूमा सेन्टोको सीप पनि देख्छौं जब पार्कमा सुविधाहरू ओभरफ्लो गर्न थाल्छन् किनभने धेरै पानी परिरहेको छ। मैले सोचें कि यसले उनको चरित्रलाई केही गहिराइ प्रदान गरेको छ, र त्यसले उसलाई अझ रमाईलो र आकर्षक बनायो।
आमगी ब्रिलियन्ट पार्कको सट्टा हेर्नको लागि देखाउँदछ
त्यहाँ धेरै कार्यक्रमहरू छन् जुन तपाईंले ABP को सट्टा देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ केहि तल छन् जुन हामी सुझाव दिन्छौं। यद्यपि यो तपाईं एक व्यक्ति को रूपमा को हुनुहुन्छ निर्भर गर्दछ, केहि व्यक्तिहरू ABP लाई मन पराउँछन् जस्तो कि यो छ। हामी पक्का छैनौं कि कुन विधा एबीपी भित्र पर्छ, तर यो जीवन र साहसको टुक्रा हुन सक्दछ। हामी परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी रोमान्सलाई विचार गर्दैनौं।
हामीले केहि भेला गरेका छौं जुन केहि छैन र केहि छैनन। हामी आशा गर्दछौं कि तपाईं ती सबैमा रमाईलो हुनुहुनेछ।
भन्नुहोस् म तिमीलाई माया गर्छु
कागुया समा (प्रेम युद्ध हो)
रोजारियो + भिम्पायर
तपाईं लिफ्ट डम्बेलहरू कति भारी छन्?
सँधै यो ब्लग पोष्ट मात्र तपाईंलाई सूचित गर्न को लागी हो। हामी आशा गर्दछौं कि यो ब्लग, हाम्रो अन्य अरू जस्तै, तपाईंलाई सूचित गर्नमा यो प्रभावकारी भएको थियो। हामी यस जस्तो बढी सामग्री पोष्ट गर्ने लक्ष्य राख्दै छौं। यदि तपाईं हामीलाई मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया यो ब्लग मनपराउँनुहोस्, र यदि तपाईं सक्नुहुन्छ भने यसलाई साझा गर्नुहोस्। तपाईले सदस्यता लिन पनि सक्नुहुन्छ ताकि तपाईले तपाईलाई इ-मेल गर्न सक्नुहुनेछ प्रत्येक पटक हामी नयाँ ब्लग पोस्ट गरेपछि।
फैन्सी एक द्रुत गती आर्केड खेल को शीतल गर्न को लागी? चाज उपत्यका प्रयोग गर्नुहोस्, खेल्नको लागि स्वतन्त्र, कुनै गडबड छैन, केवल शुद्ध मजा!
चाज उपत्यका खेल
टैग: amagibrilaintparkseno amagibrillaintpark समीक्षा amagibrillianrpark समीक्षा अद्भुत पार्क अद्भुतपार्कफुल लेखसमीक्षा एनिमे isamagibrillaintparkworthit? isamagibrillaintparkworth हेर्दै हुनुहुन्छ? isamagibrillantparkworth watching कारणहरू म्याग्बिब्रिलियन्टपार्किटस्वार्थवाचिंग कारणहरू म्याग्बिब्रिलियन्टपार्किसनटवर्थवाचिंग कारणहरू म्याग्बिब्रिलियन्टपार्किसन्टवर्थवाचिंग amagibrillianpark को समीक्षा sentoamagibrillianpark के Iwatchamagibrilliantpark?
Pingback: Seiya कानी - चरित्र प्रोफाइल - पालना दृश्य
अघिल्लो प्रविष्टि डेडको हाईस्कूल - सीजन २ अफवाहहरू + विचार
अर्को प्रविष्टि शीर्ष Ro रोमान्स एनिमे